ओमानलाई हराउन नायक बनेका पाँच नेपाली खेलाडी | Hamro Khelkud
ओमानलाई हराउन नायक बनेका पाँच नेपाली खेलाडी
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग–२ त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिज अन्तर्गत आइतबार राती ओमानलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै इतिहास रचेको छ । ओडिआई क्रिकेटमा नेपालले ओमानलाई पहिलो पटक पराजित गर्दै भ्रमण सुखद अन्त्य गरेको छ ।
जितको लागि १ सय २२ रनको सामान्य विजयी लक्ष्य पछ्याएको नेपालले १८.२ ओभरमा ३ विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको थियो । त्यसअघि अल अमरेत क्रिकेट मैदान मस्कटमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको घरेलु टोली ओमान ३७.१ ओभरमा १ सय २१ रनमा अल आउट भएको थियो ।
पाकिस्तानी मुलका खेलाडीको बाहुल्यता भएको ओमान नेपालमाथि निरन्तर हाबी हुँदै आएको थियो । गतवर्ष नेपाललाई घरेलु मैदान टियुमा ओमानले दुबै खेलमा सहज जित हात पारेको थियो । यस पटक ओमानले आफ्नो घरेलु मैदानमा पहिलो खेलमा ५ विकेटको सहज जित हात पारेको थियो । पहिलो खेलमा नेपाल टस जितेर खेल हार्न पुगेको थियो । तर दोस्रो खेलमा नेपालले टस जित्दै बलिङ रोज्ने निर्णय लियो । जुन नेपालका लागि सहि सावित भयो । पाकिस्तानी मुलका खेलाडीको बाहुल्यता भएको ओमानलाई उसकै घरमा सहजै जित निकाल्नु सामान्य कुरा भने होईन ।
नेपालले ओमानसँग खेलमा ब्याटिङ र बलिङ दुबैमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ सहज जित हात पारेको थियो । बलिङमा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सस्तैमा अल आउट गरेपछि नेपालको जित सहज बनेको थियो । ओमानलाई उसकै घरेलु मैदानमा सहजै पराजित गर्न नेपालबाट नायक बनेका पाँच खेलाडी यस प्रकार छन् ।
५. शरद भेषावकर
नेपाली टोलीका सर्वाधिक अनुभवी खेलाडी शरदले ब्याटिङबाट धेरै योगदान दिने अवसर पाएनन् । उनले अन्तिममा एक रन बटुल्दै नेपाललाई जित पक्का गराएका थिए । तर बलिङमा तल्लोक्रममा उनले दुई विकेट दिँदै ओमानलाई सस्तैमा समेट्न महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए ।
खराब ब्याटिङ गरेको ओमानलाई तल्लोक्रममा दुई अलराउन्डर सन्दीप गौड र नसिम खुशी अन्तिम आशाका रुपमा थिए । शरदले खुशीलाई १२ र गौडलाई ८ रनमा क्याच आउट गराएका थिए । यी दुबै अलराउन्डर राम्रो ब्याटिङको क्षमता राख्छन् । कप्तान जिशान मकसुदलाई शरदले अर्को इनिङबाट साथ दिन पाएनन् । यी दुई खेलाडीले मकसुदसँग राम्रो साझेदारी गर्न पाएको भए ओमानले खेलमा पूनरागमन गर्न सक्थ्यो ।
युवा ओपनर आसिफ शेखले ४४ बलमा ७ चौका सहित ४० रनमा आउट भए । आसिफ र ज्ञानेन्द्र मल्लले दोस्रो विकेटका लागि ९५ रनको उत्कृष्ट इनिङ खेलेका थिए । नेपाल सानो इनिङ पछ्याउनै धेरै पटक संघर्ष गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । तर आसिफले पावर प्लेमा नेपाललाई उत्कृष्ट सुरुवात दिदै सहज जित दिलाए । आसिफले कुनैपनि समय ओमानका बलरलाई हाबी हुन दिएनन् । नेपालको जितमा उनले महत्वपूर्ण योगदान दिए ।
३. ज्ञानेन्द्र मल्ल
कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले ओमानसँग खेलमा कप्तानी इनिङ खेलेका थिए । ज्ञानेन्द्र ४६ बलमा ४ चौका र २ छक्का सहित ५२ रनमा अविजित रहे । लगातार दोस्रो अर्धशतक प्रहार गर्दै नेपाललाई सहजै जित दिलाउन सफल रहे । ज्ञानेन्द्रले आसिफसँग दोस्रो विकेटका लागि गरेको साझेदारी नेपालका लागि महत्वपूर्ण रह्यो । ज्ञानेन्द्रको उत्कृष्ट ब्याटिङमा नेपालले सहजै जित निकाल्न सफल भयो ।
ओमानलाई सस्तैमा अल आउट गर्न स्पिनर सन्दीप लामिछानेले उत्कृष्ट बलिङ गरेका थिए । सन्दीपले ओमानको मध्यक्रम ध्वस्त बनाएपछि नेपालले सामान्य लक्ष्य पाएको थियो । तीव्र गतिका बलर करण केसीले शीर्षक्रम पेभिलिएन फर्काएपछि ओमानको ब्याटिङ मध्यक्रममा अडिएको थियो ।
सन्दीपले १४ औं ओभरमा विकेटकिपर सुरज कुमार र नेस्टर धम्बाको विकेट खेलको एक टर्निङ प्वाइन्ट थियो । ओमानका प्रमुख अलराउन्डर मोहम्मद नदीमको विकेट लिएपछि नेपालको जित सहज बनेको थियो । सन्दीपले ८.१ ओभरमा २ मेडन सहित १८ रन खर्चेर ४ विकेट लिए ।
१. करण केसी
करण नेपालको जितका सुपर हिरो हुन् । टस जितेर पहिला बलिङ रोजेको नेपाललाई करणले ड्रिम सुरुवात दिलाएका थिए । ओमानलाई उसकै घरेलु मैदानमा कम योगफलमा समेट्न उत्कृष्ट सुरुवातको आवश्यक थियो । ओमानका प्रमुख चार ब्याट्सम्यानलाई आउट गरेपछि ठूलो योगफलको सम्भावना सकिएको थियो ।
करणको उत्कृष्ट सुरुवातले अन्य बलरलाई पनि सहज भयो । करणले तेस्रो ओभरमै ओपनर जतिन्दर सिंहलाई १३ रनमा क्याच आउट गराएका थिए । त्यस्तै सुफ्यान मोहम्मद र अयान खानलाई आउट गर्दै ओमानलाई ३०–३ को कमजोर अवस्थामा पुर्याएका थिए । कप्तान जिशान मकसुदलाई ४१ रनमा आउट गरेका थिए । करणनै खेलको प्लेयर अफ द म्याच चुनिए । असली हकदार पनि उनी थिए ।